International Water Management Institute – IWMI ၏ အထွေထွေ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် ၂၀၁၉ ဘူဒါပတ်စ် ရေညီလာခံ (Budapest Water Summit 2019) တွင် အဓိကဟောပြောသူတစ်ဦးဖြစ်သော Dr. Claudia Sadoff က "ရေကဏ္ဍပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းတွေကို လျှော့ချဖို့ သိပ္ပံပညာ လုံလုံလောက်လောက်ရှိပြီလား" ဟု ထိုညီလာခံမှာ မေးခွန...
Applications for the MAS class of 2021/2022 are now being accepted! Students who require scholarship support are HIGHLY encouraged to apply in January so that they can be considered for the scholarship schemes that are available. The following requirements MUST be met: Educational background in envi...
15 January 2021 - Source: Myanmar Times It has been nearly two months since the rain last fell over Yangon. Though many clouds have passed over the city, no precipitation has fallen from the sky. This is normal for Yangon, meteorologically-speaking. On average it rains for just over4days in N...
Groundwater Week Has Been Introduced To Myanmar For The First Time
Groundwater week,ayearly held event initiated by National Groundwater Association since 2013, is mainly intended to meet up all the professionals across the world including groundwater specialists, scientists, engineers, manufacturers, suppliers and also the groundwater activists, users and to put...
ခြေဆင်း စာရေးသူသည် ရှေ့တွင် "လူ့အခွင့်ရှူ့ထောင့်ဖြင့် ရေရပိုင်ခွင့် သုံးသပ်ခြင်း - ရေရပိုင်ခွင့်သည် လူ့အခွင့်အရေးလော" ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးတင်ခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ ဆင်ခြင်သုံးသပ်သည့် စာစုအပေါ်တွင် မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းနေသည်မှာ "ရေသည် စီးပ...
Inle lake conservation to be implemented in4zones
08 December 2020 - Source: Myanmar Times Four project zones have been categorised in the Inle Lake to streamline efforts to ensure the environmental sustainability and the development of the local economy of the communities surrounding the lake. Zone 1 includes Nyaungshwe township, Zone2includes K...
26 November 2020 - Source: Bangkok Post More than 20 years ago, when two Chiang Rai-based environmentalists, Niwat Roikaew and Somkiat Kuenwongsa, learned that the Chinese government were blasting rapids in the upper Mekong River from Yunnan to Myanmar and Laos to clear the way for large commercial ...
Expressions of Interest to preserve Inya Lake
18th November 2020 - Source: Myanmar Times The Yangon City Development Committee (YCDC) has invited expressions of interest (EOI) to help preserve Yangon's famous Inya Lake. "Local and foreign companies, as well as joint ventures, who would like to assist us in preserving Inya Lake can submit their ...
"ရေ နှင့် စွမ်းအင် ဆက်စပ်မှုများမှ အားပြိုင်မှုများသည် ရေ နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး စည်းမျဉ်းချမှတ်မှုများကို လိုအပ်လာပေသည်" ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွဲ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များထဲမှ အမှတ်စဉ် (၆) ဖြစ်သည့် "သန့်ရှင်းသောရေ နှင့် မိလ္လာစနစ်ရရှိရေး" သည် အမှတ်စဉ် (၇) ဖြစ်သော "တတ်နိ...
ယခုနှစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်ပုဒ်မှာ Time for Nature "သဘာဝချိန်ခါ" ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည့် ကိုဗစ်-၁၉ အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများ ပြေလျော့လာသည့် နည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စိမ်းလန်းစိုပြေသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားသက်ဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဂျလန်ဟာမြို့ (J...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဆည်နှင့်ရေကာတာ အရေအတွက်သည် ဆက်လက်တိုးပွားလျက် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေချိုစီးဆင်းသည့် ဧရိယာများကို လှိုင်းမြင့်များမှ ကာကွယ်မှုပေးသည့်အပြင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း ကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာကာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ရေလွှမ်းမိုးမည့် ဘေးမှလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် ပ...
23 SEP 2020 - Source: Global Times Chinese experts expressed their willingness to contribute to the sustainable development of Myanmar's water facilities atarecent online symposium drawing together more than 30 experts from the Lancang-Mekong countries and international organizations to discuss be...
Environmental Water Management in the Indo-Pacific: An Australian Perspective
A new AWP knowledge product is now available that focuses on environmental water management in the Indo-Pacific region – authored by Professor Stuart Bunn, Associate Professor Mark Kennard, and Professor Sue Jackson from the Australian Rivers Institute at Griffith University. This report includes: a...